Vonjeo ny lanitrao: mandefa fanangonan-tsonia ny mpanara-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka eropeana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vonjeo ny lanitrao: mandefa fanangonan-tsonia ny mpanara-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka eropeana
Tandindomin-doza ny fifehezana ny fifamoivoizana an-habakabaka manerana an'i Eropa. Mandeha ny fanapahana tsy manam-paharoa amin'ny loharanon-karena, misy fiantraikany amin'ny toe-tsosialy sy ny fiasan'ny mpiasa amin'ny fitantanana ny fifamoivoizana an-habakabaka, ny fiarovana ny mpandeha ary ny fahaiza-mitantana ny fifamoivoizana an-habakabaka ato ho ato.
Mampahafantatra ny olom-pirenena eropeana ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao ny Seranam-piaramanidina misahana ny fifamoivoizana sy ny vokadratsin'ny fiarovana any an-danitra, ny Sendika ary ny Fikambanana matihanina misolo tena ny mpiasa ATM / ANS (Air Traffic Management / Air Navigation Services) (ATCEUC, ETF, IFAIMA, IFATCA, IFATSEA) dia nanapa-kevitra ny hanao fanangonan-tsonia. Izahay dia mitady fanohanana amin'ny fampiantsoana anay:
Miantso ireo andrim-panjakana eoropeanina sy firenena mpikambana izahay hiara-hiasa amin'ireo mpiasa fiaramanidina rehetra ary hahita drafitra ho an'ny sehatry ny seranam-piaramanidina eropeana izay misy ny fitantanana ny fifamoivoizana sy ny serivisy fitaterana an-habakabaka!
The Covid-19 ny areti-mandringana dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny seranam-piaramanidina eropeana, misy fiatraikany amin'ireo mpamatsy tolotra fiaramanidina (ANSP - orinasa na masoivoho manome fifehezana ny fifamoivoizana an-habakabaka) toy ireo sehatra hafa amin'ny indostrian'ny fiaramanidina. Noho ny toetra sy ny fahasarotan'ny fotodrafitrasa sy serivisy omena, dia nijaly mafy ny ANSP tamin'ny krizy COVID-19. Mbola hijaly hatrany izy ireo amin'ny ho avy raha tsy misy vahaolana eraky ny eropeana. Ny serivisy fitaterana an'habakabaka dia notazonina 24/7 nandritra ny krizy (sidina fiara mpamonjy voina, sidina mitondra entana mitondra fitaovana ilaina sy fanafody, sidina hopitaly ary fampodiana an-tanindrazana).
Volker DICK, filohan'ny ATCEUC: "Ny fiasan'ny serivisy ho an'ny fifamoivoizana an'habakabaka dia voaporofo fa tena ilaina amin'ny fotoan-tsarotra. Ny entana ilaina voalohany, ny dokotera, ny marary dia tsy maintsy nentina tamina ambaratonga azo antoka avo indrindra mba hahasoa ny fiaraha-monina eropeana iray manontolo. ”
Hatramin'ny fiandohan'ny volana febrily dia niatrika tsy fisian'ny fidiram-bola tanteraka ny ANSP. Nisy ny fifanarahana natao mba hamelana ireo mpampiasa habakabaka hanemotra ny fiampangana izay aloa aloa amin'ny ANSP. Ity tsy fahampian'ny famatsiam-bola ity dia nanjary fahasahiranana lehibe ho an'ny ANSP, ary miantraika amin'ny ain'ny mpiasa amin'ny fitantanana ny fifamoivoizana amin'ny rivotra izany.
Frédéric DELEAU, IFATCA (mpisolo toerana) filoha lefitra Eraopeana dia manazava: "Raha tsy misy ny famatsiam-bola maharitra sy maharitra an'ny ANSPs dia ho tandindomin-doza mandritra ny taona ho avy ny kalitaon'ny serivisy omena sy ny fahombiazan'ny fahaiza-manao sy ny fiarovana. Ny fisian'ny serivisy toy izany amin'ny faritra sasany amin'ny tambajotra dia mazava ho azy fa atahorana. Ny Air Controllers Controllers sy ny mpiasa eo aloha dia voaporofo fa mandray ny andraikiny amin'ny fotoan-tsarotra. IFATCA dia manantena ny mpiara-miombon'antoka hafa hiara-hiasa sy hiantoka ny fitoniana ary hamorona faharetana ho an'ireo fotodrafitrasa tena ilaina amin'ny Air Navigation Services (ANS). ”
Costas Christoforou, talen'ny IFATSEA Europe, dia nameno hoe: "Ny fampiasam-bola antonony / maharitra amin'ny haitao sy ny olona dia tsy azo antoka intsony. Ny ANSP dia tsy maintsy mifantoka fotsiny amin'ny fahavelomany sy amin'ny fitazonana ny haavon'ny serivisy farany azo atao. ”
Ilaina ny fanampiana maika hamerenana ity sehatra ity ary hiantoka ny famerenana amin'ny laoniny sy ny hoavin'ny indostrian'ny fiaramanidina iray manontolo. Tokony hatao ny ezaka faran'izay betsaka hitazonana ny fitantanana ny fifamoivoizana an-habakabaka, fotodrafitrasa iray manohana an'i Eropa sy ny toekareny. Ny olom-pirenena eropeana dia mila mahatsapa ny zava-mitranga any amin'ny lanitra eropeana. Ny haavon'ny avo lenta sy ny fiarovana ny Sky Europe dia mety hampidi-doza raha tsy misy ny vita.
Charles-André QUESNEL, filohan'ny komity ATM ETF, dia maneho ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny andrim-panjakana Eoropeana: "Tsy misy fanampiana ho an'ny sehatry ny ATM / ANS eo amin'ny sehatra eropeana hiatrehana ny vokadratsin'ny krizy COVID-19. Mifanohitra amin'izany aza, afaka mahita fihetsika politika mampidi-doza ataon'ny Vaomiera eropeana isika, manakana ny famerenana amin'ny laoniny ireo serivisy tombotsoan'ny jeneraly eropeana. ”
Tato ho ato, nanafika ny serivisy fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka tamin'ny fomba maro ny Vaomiera eropeana. Voalohany, nanolo-kevitra ny hanova ny lalàna mamaritra ny fidiram-bolan'ny ANSP amin'ny alàlan'ny fanafoanana na fampihenana tanteraka ny rafitra fanarenana raha toa ka ambany ny haavon'ny fivezivezena (mekanika fizarana loza mety hitranga amin'ny fifamoivoizana). Mandritra izany fotoana izany, ny tompon'andraikitra dia nametraka faneriterena tsy mendrika amin'ny solontenan'ny mpampiasa manerana an'i Eropa mba hampiakarana ny isan'ny mpiasa an-tsokosoko ao amin'ny ANSP, hanohy hampihena ny karama mafy ary hampiato ny fandraisana mpiasa. Ny mpiasa sy ny fianakaviany dia efa voa mafy, saingy ity fahasimbana ara-tsosialy mahery ity dia toa tsy ampy ho an'ny Vaomiera Eoropeana.
Nanamafy i Fernando LOPES, filohan'ny IFAIMA: "Ny fanafihana ny ANSP sy ny mpiasan'izy ireo dia nitombo hatrany amin'ny ambaratonga mbola tsy nisy toa azy ary tokony hijanona izao."
Radisson Hotel Group: fanendrena vaovao hitarika ny hetahetan'ny fanitarana an'i Afrika
Ny Airbus Foundation dia nahavita ny sidina fanampiana COVID-19 sy Ebola